कपन पुग्नेका लागि जिङ्को फरेष्ट रिसोर्ट | .:: Welcome || Paryatannews
Home » अन्तर्वार्ता » कपन पुग्नेका लागि जिङ्को फरेष्ट रिसोर्ट
कपन पुग्नेका लागि जिङ्को फरेष्ट रिसोर्ट
हुन त यो प्रचण्ड गर्मी छल्नका लागि मानिसहरू पौडी पोखरी वा सितल छहारी खोज्ने गर्छन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनेहरू एयर कन्डिशन (एसी) वा अन्य विद्युतीय चिसो हुने सामग्रीको प्रयोग गर्छन् ।
तर, यो घर र कार्यालयमा मात्र सीमित हुन्छ । बाहिरी निस्केपछि फेरी उष्णले हपहपी बनाइहाल्छ । शरीरभर पसिना अनि गर्मीले गर्दा खानाको स्वादलाई नै फिक्का बनाउँछ । बढ्दो आधुनिकीकरण रेष्टुँरा सँस्कृति पनि उपत्यकालगायत अन्य सहरमा मौलाएको छ । महिनाको एकचोटी वा सम्भव भए हप्तामा एक चोटी रेष्टुँरा गएर खाना खाने चलन युवा बर्गमा बढ्दो छ । यही सँस्कृतिको सत्कार गर्न काठमाडौँमा विभिन्न स्थानमा बेग्लै स्वाद, शैली अनि बनावटका रेष्टुँराहरू सञ्चालन भएका छन् ।
यस्तै, रिसोर्टहरुको भीडमा आफूलाई फरक उभ्याउन सफल भएको छ– कपन स्थित जिङ्को फरेस्ट रिसोर्ट । यो रिसोर्टको बनावट र यसको वरिपरी भएको प्राकृतिक छटाले यसलाई अझ गुणात्मक बनाएको छ । काठमाडौंको कंक्रिट बनावटबाट एक छिन भए पनि जङ्गलको अनुभव तथा वनस्पतीसँग साक्षात्कार गर्नका लागि यो स्थान उपयुक्त छ । रिसोर्ट १ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रिसोर्ट वरिपरिका क्षेत्रमा ७ सय प्रजातिको बनस्पती पाइने रिसोर्टका सञ्चालक मध्ये एक गणेश गुरागाईंको दाबी छ । वरिपरि बनस्पतीले घेरिएका बाँस, बेट तथा नियालोबाट बनेका सानासाना टहराहरू र एउटा कंक्रिटको पूर्वाघार नै यो रिसोर्टको बनावट हो । त्यसो त यो रिसोर्टमा २ करोड ७० लाख वर्ष अघि देखि अस्तित्वमा आएको जिङ्को बनस्पती पनि छ । यो बनस्पती विभिन्न प्राकृतिक कालखण्डमा समेत आफूलाई अस्तित्वमा राख्न सफल भएकोले यसलाई विशेष महत्वको साथ हेर्ने गरिन्छ । यही नामले सञ्चालन गरेकोले यस रिसोर्टले जापानबाट जिङ्कोको चिया समेत ल्याउने योजना बनाएको छ ।
विभिन्न किसिमका वनस्पति तथा बोटविरुवा पाइने हुँदा वनस्पतिबारे चाख राख्ने जो कोहीका लागि पनि यो स्थान अध्ययन तथा अवलोकनका लागि उपयुक्त थलो हुनेछ । अहिलेको गर्मीमा समेत यहाँ चिसोको अनुभव गर्न सकिन्छ । खानाका पारखीहरूका लागि राजधानीमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका रिसोर्टहरू छँदैछन् । तर, यो गर्मीमा प्राकृतिक रूपमा नै चिसो, शान्त अनुभव गर्र्दै प्रकृतिसँग लुकामारी खेल्दै खानाको स्वाद लिनुको आनन्द पनि अद्भूत हुने गर्छ । प्राय रेष्टुँरामा पाइने सबै परिकार यहाँ पनि उपलब्ध छन् । तर यहाँ ती परिकार अन्यको भन्दा बढी स्वस्थकर र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुने गुरागाईको दाबी छ ।
यहाँ खाना खाँदै इण्टरटेनमेन्टका वाइफाईको व्यवस्था समेत गरिएको छ । यहाँ सबै उमेरका समूहका ग्राहक आउने गुरागार्इंको दाबी छ । तर, यूवा जमात चाहीँ बढी नै भएको अर्का सञ्चालक प्रकाश खत्री बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, रिसोर्टले ग्राहक योजना पनि ल्याएको छ । प्रत्येक ५ सयको खाना खाँदा एउटा प्रिभिलेज कार्ड दिने गरेको सञ्चालक नरेश चालिसेको भनाइ छ । ३० वटा यस्तो कार्ड जम्मा भएपछि १५ सय बराबरको खाना निःशुल्क गराउने चालिसेले बताउनुभयो । यहाँ नयाँ वर्ष, क्रिस्समस तथा अन्य त्यस्तै माहौलमा अनप्लग्ड सांगीतिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने गरेको छ । यस्ता कार्यक्रममा ख्यातिप्राप्त कलाकारका साथमा स्थानीय कलाकार तथा ब्यान्डको पनि सांगीतिक प्रस्तुति रहने गरेको छ ।
खानाको विशेष परिकार
रिसोर्टकोे विशेषता भनेकै दाङको बोदिया भाले (खसी पारेको भाले) र दाङको लोकल चामलबाट बनाइएको खाना खान पाउनु हो । त्यस्तै, मदिराको पारखीका लागि पनि देश तथा विदेशका विभिन्न ब्राण्डेड तथा लोकल मदिरा उपलब्ध छन् । मापसे चेकिङका कारण मादक पदार्थ सेवन गर्न डराउनु पर्दैन । जिङ्को रिसोर्टले मादक पदार्थ सेवन गरेका आफ्ना ग्राहकलाई घरसम्म लगिदिने व्यवस्था पनि गरेको छ । – एकराज बास्तोला
यस्तै, रिसोर्टहरुको भीडमा आफूलाई फरक उभ्याउन सफल भएको छ– कपन स्थित जिङ्को फरेस्ट रिसोर्ट । यो रिसोर्टको बनावट र यसको वरिपरी भएको प्राकृतिक छटाले यसलाई अझ गुणात्मक बनाएको छ । काठमाडौंको कंक्रिट बनावटबाट एक छिन भए पनि जङ्गलको अनुभव तथा वनस्पतीसँग साक्षात्कार गर्नका लागि यो स्थान उपयुक्त छ । रिसोर्ट १ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रिसोर्ट वरिपरिका क्षेत्रमा ७ सय प्रजातिको बनस्पती पाइने रिसोर्टका सञ्चालक मध्ये एक गणेश गुरागाईंको दाबी छ ।
वरिपरि बनस्पतीले घेरिएका बाँस, बेट तथा नियालोबाट बनेका सानासाना टहराहरू र एउटा कंक्रिटको पूर्वाघार नै यो रिसोर्टको बनावट हो । त्यसो त यो रिसोर्टमा २ करोड ७० लाख वर्ष अघि देखि अस्तित्वमा आएको जिङ्को बनस्पती पनि छ । यो बनस्पती विभिन्न प्राकृतिक कालखण्डमा समेत आफूलाई अस्तित्वमा राख्न सफल भएकोले यसलाई विशेष महत्वको साथ हेर्ने गरिन्छ । यही नामले सञ्चालन गरेकोले यस रिसोर्टले जापानबाट जिङ्कोको चिया समेत ल्याउने योजना बनाएको छ ।
यहाँ खाना खाँदै इण्टरटेनमेन्टका वाइफाईको व्यवस्था समेत गरिएको छ । यहाँ सबै उमेरका समूहका ग्राहक आउने गुरागार्इंको दाबी छ । तर, यूवा जमात चाहीँ बढी नै भएको अर्का सञ्चालक प्रकाश खत्री बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, रिसोर्टले ग्राहक योजना पनि ल्याएको छ । प्रत्येक ५ सयको खाना खाँदा एउटा प्रिभिलेज कार्ड दिने गरेको सञ्चालक नरेश चालिसेको भनाइ छ ।
३० वटा यस्तो कार्ड जम्मा भएपछि १५ सय बराबरको खाना निःशुल्क गराउने चालिसेले बताउनुभयो । यहाँ नयाँ वर्ष, क्रिस्समस तथा अन्य त्यस्तै माहौलमा अनप्लग्ड सांगीतिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने गरेको छ । यस्ता कार्यक्रममा ख्यातिप्राप्त कलाकारका साथमा स्थानीय कलाकार तथा ब्यान्डको पनि सांगीतिक प्रस्तुति रहने गरेको छ ।
रिसोर्टकोे विशेषता भनेकै दाङको बोदिया भाले (खसी पारेको भाले) र दाङको लोकल चामलबाट बनाइएको खाना खान पाउनु हो । त्यस्तै, मदिराको पारखीका लागि पनि देश तथा विदेशका विभिन्न ब्राण्डेड तथा लोकल मदिरा उपलब्ध छन् । मापसे चेकिङका कारण मादक पदार्थ सेवन गर्न डराउनु पर्दैन । जिङ्को रिसोर्टले मादक पदार्थ सेवन गरेका आफ्ना ग्राहकलाई घरसम्म लगिदिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
– एकराज बास्तोला
कपन पुग्नेका लागि जिङ्को फरेष्ट रिसोर्ट Reviewed by Reporter Paryatannews on Aug 28 . हुन त यो प्रचण्ड गर्मी छल्नका लागि मानिसहरू पौडी पोखरी वा सितल छहारी खोज्ने गर्छन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनेहरू एयर कन्डिशन (एसी) वा अन्य विद्युतीय चिसो हुने हुन त यो प्रचण्ड गर्मी छल्नका लागि मानिसहरू पौडी पोखरी वा सितल छहारी खोज्ने गर्छन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनेहरू एयर कन्डिशन (एसी) वा अन्य विद्युतीय चिसो हुने Rating: 0
Please examine this program together with your perform supervisor prior to making any
contracts using holds – as not many needs could possibly be reasonable or relevant.